» भ्वाईस अफ नेपालको पहिलो डुओ ‘राहुल–कुमा’ (भिडियो)
भ्वाईस अफ नेपालको पहिलो डुओ ‘राहुल–कुमा’ (भिडियो)
४ कार्तिक २०७६, सोमबार ०८:५१
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ४ कात्तिक । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ ले ऐतिहासिक पहिलो डुओ प्राप्त गरेको छ । भ्वाईस अफ नेपालको सिजन २ को सेकेन्ड लास्ट ब्याटलमा ऐतिहासिक पहिलो डुओ प्राप्त भएको हो । राहुल विश्वकर्मा र कुमा सागर ‘राहुल–कुमा’ का रुपमा डुओ भएका हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
शुक्रबार भएको तेस्रो ब्याटलमा टिम आस्थाबाट कुमा सागर र राहुल विश्वकर्मा भिडेका थिए । उनीहरुले ‘नहेर मलाई कर्के नजर’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यस ब्याटलबाट रकिङ पर्फोमेन्स दिएका राहुल र कुमालाई भ्वाईस अफ नेपालको स्टेजमा कोच आश्थाले डुओका लागि मौका दिए । चारै जना कोचको सहमति तथा राहुल र कुमाको सहमतिमा उनीहरु दुबै डुओ हुँदै नकआउटका लागि छानिएका हुन् । यससँगै यी दुई दमदार गायकले अब ‘राहुल–कुमा’ को नामबाट एक भई नकआउट भिडन्त गर्नेछन् । यस अघि कोच प्रमोदले पनि मधु लामा र साजन लामालाई ऐतिहासिक पहिलो डुओका लागि आग्रह गरेका थिए । तर उनीहरु एक भएर अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । तर यो पटक भने भ्वाईस अफ नेपालले पहिलो डुओ पाउन सफल भएको छ । आदरणीय दर्शविन्द यी प्रतियोगीहरुमध्ये तपाईलाई कसको आवाज मनपर्छ ? तपाईको विचारमा फाईनलसम्म कुन प्रतियोगीहरु पुग्न सक्छन् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
मिस ग्राण्ड ईन्टरनेशनलमा नेपालकी निशा पाठकको दमदार ईन्ट्री